American Airlines 2020 epasi rose ekuwedzera zvirongwa zvakaburitswa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » American Airlines 2020 epasi rose ekuwedzera zvirongwa zvakaburitswa
Airlines • nhandare yendege • Czechia Breaking News • Hungary Kuputsa Nhau • Israel Breaking News • Marokero Kuputsa Nhau • nhau • Poland Breaking Nhau • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
American Airlines iri kuvhura nzira nyowani yenyika dzendege kuEurope, Israel neMorocco muna 2020.
Philadelphia (PHL) kuenda kuCasablanca, Morocco (CMN) inotanga munaJune 4
Dallas-Fort Worth (DFW) kuenda kuTel Aviv, Israel (TLV) inotanga Nyamavhuvhu 9
Chicago (ORD) kuKrakow, Poland (KRK) inotanga May 7
ORD kuenda kuBudapest, Hungary (BUD) inotanga May 7
ORD kuPrague, Czech Republic (PRG) inotanga May 8
American Airlines ine mushonga wekupera-kwe-zhizha blues: nzira nyowani dzeinotevera zhizha. Nhasi, America yakafumura mwaka wayo wezhizha 2020 wepasirose, iyo inosanganisira inotevera sevhisi.
Kuenderera mberi miganho: Africa
IAmerica ichatanga kushandira kuMorocco gore rinouya, ichave ndiyo yekutanga kupinda kwendege mukondinendi yeAfrica. American ichave yega mutakuri weUS ane basa risingamire kuCasablanca, inozoitwa katatu pasvondo paBoing 757.
"Vatengi vedu nenhengo dzechikwata vanga vachibvunza kuti tichatanga riini kushandira Africa, uye handina kukwanisa kufara kuita chiziviso ichi chebasa kutanga muna 2020," akadaro Vasu Raja, Mutevedzeri weMutungamiri weNetwork neShedhiyo. Kuronga. “Tinotarisira kushanda neRoyal Air Maroc pavachapinda mumwenyika® muna Ndira, izvo zvinobvumidza kunyange kubatana kwakawanda kuenda kuAfrica kunzvimbo dzakaita seMarrakech, Lagos neAccra. Uku kunongova kutanga. ”
Kudzokera kuTel Aviv
Sezvo kudiwa kuri kuramba kuchikura pakati peUS neTLV, American iri kuwedzera nhatu nendege nendege kubva kuDFW, nzvimbo yayo hombe. Idzi nendege dzinoshandira vatengi muUS yese uye dzinobvumidza vatengi vazhinji kungomira kamwe chete, panzvimbo penzvimbo mbiri dzekumira dzaive dziripo, kuTLV. Uye sezvo indasitiri yetekinoroji iri kuramba ichikura mumusika, American ichapa nzira inoshanda kwazvo kumaguta eU.S tech seAustin, Texas, neSan Jose, California, mukuwedzera kune imwechete-yekumira sevhisi kumaguta makumi matatu nematatu muUS.
Kuwedzera muEastern Europe
American Midwest hub, ORD, yaona kukura kwakakura uye ikozvino inopa zvigaro zvepamba uye zvepasi rose nhasi pane zvave mune anopfuura makore gumi. Zhizha rinotevera, kukura kwacho kunoenderera nenzvimbo nhatu nyowani kuEastern Europe, kusanganisira ndege yekutanga yekuAmerica kuenda kuKRK uye sevhisi nyowani kuPRG neBUD, iyo America yakatanga kubhururuka kuenda kumwaka kubva kuPHL muna2018.America ichapa zvigaro zvepamberi zvakanyanya kuEastern Europe ye vatakuri vese veUS anotevera zhizha, sezvo dzese dzendege dzichashandiswa neBoeing 787-8, iine zvigaro makumi maviri zveBusinessship uye zvigaro makumi maviri nesere zveEconomic.
"Pane kudiwa kwakasimba kwemuno kuEastern Europe muChicago, uye zvakakosha kuti tipe rubatsiro rwakawanda kune vatengi vedu kuti vashanyire mhuri neshamwari kana kutsvaga chikamu chitsva chenyika," akadaro Raja. "Chicago anga ari muenzaniso wakanaka wekuyedza zvinhu zvitsva netiweki yedu, sekushandira mwaka kuAthens kwakatangisa kutanga kwegore rino, uye vatengi pavanotora mukana, zvinotipa mukana wekuramba tichikura."
America ndiyo yega ichava mutakuri weUS achipa KRK, BUD nePRG kubva kuORD.
Ndege nyowani dzichavepo kuti dzitenge Nyamavhuvhu 12, kunze kweTLV, iyo ichave iriko kutengwa Gumiguru.